नयाँ सभामुख सापकोटाले एमसीसी पास गराउन सक्ने ३ संभावित कारणहरु - Samajbad
नयाँ सभामुख सापकोटाले एमसीसी पास गराउन सक्ने ३ संभावित कारणहरु
लामो समयदेखिको खिचातानी पछि सत्तारुढ नेकपाले स्थायी समिति सदस्य अग्निप्रसाद सापकोटालाई सभामुख बनाउने निर्णय गरेको छ । पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादी केन्द्रले आफ्नो पक्षबाट सभामुख बनाउन खोजेपछि संसदको बैठक तीन पटक स्थगित भएको थियो । पूर्वएमालेबाट अध्यक्ष ओलीले पूर्व सभामुख सुबास नेम्वाङलाई सभामुख बनाउनु पर्ने भन्दै अडान लिएका थिए भने प्रचण्डले आफ्ना विश्वास पात्र अग्नि सापकोटा र बादलले पनि देब गुरुङ र पम्फा भुसाललाई बनाउन प्रयत्न गरेपछि सत्तारुढ नेकपामा सभामुख विवादले उग्र रुप लिएको थियो ।अब सापकोटा सभामुख बनेपछि अब एमसीसी संसदबाट पास होला कि वा महरालेजस्तै सापकोटाले पनि संसदमा टेबल नै नगर्लान् भन्ने बिषयमा सबैको चासो बढेको छ ।
यो अघि सभामुख कृष्णबहादुर महराले एमसीसी प्रस्तावलाई संसदमा टेबल नै नगरेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलगायत सत्तारुढ नेकपाका शीर्ष नेताहरु महरासँग क्रुद्ध बनेका थिए । जानकारहरुले अमेरिकी सहयोग एमसीसी नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीतिको समानान्तर अभ्यास हुने परराष्ट्र मामिलाका जानकारहरुले बताउँदै आएका छन् । कतिपयले एमसीसी मार्फत् अमेरिका नेपाल पस्ने र कालान्तरमा आफ्नो सेनाको नेपाल प्रवेश गराई एण्टी चाईना गतिविधिका लागि नेपाली भूमि प्रयोग गर्ने आशंका गर्दै आएका छन् । भने अर्का थरीले एमसीसीका विभिन्न प्रावधानहरुले नेपालको संविधानलाई निश्क्रिय पार्ने दाबी गर्दै आएका छन् । त्यसो भए नेपालको हितमा विपरित अगाडि सारिएको अमेरिकी अनुदान सहयोग एमसीसीलाई अब बन्ने सभामुख सापकोटाले के गर्लान् ? सबैको चासोको बिषय बनेको छ ।
के छन् एमसीसीका प्रावधानहरु ?
एमसीसीको धारा ३ को दफा ३–२ (च) संपूर्ण बौद्धिक सम्पत्तिमा अमेरीकाको पूर्ण अधिकार हुनेछ भनिएको छ । यसको अर्थ अमेरिकाले एमसीसी परियोजनामा कर्मचारी नियुक्ति गर्दा कित आफ्नो सेना त्यो नभएर आफ्ना दलालहरु नियुक्ति गर्छ भन्ने देखिन्छ । एमसीसी नेपालको रा ३ को दफा ३ (८) (क) परियोजनाको लेखापरिक्षण अमेरीकाको कम्पनीले मात्र गर्न सक्ने उल्लेख गरिएको छ । धारा ५ को (क) र (ख) अमेरीकी सरकारले चाहेमा जुनसुकै बेला पनि यो संझौता रद्द गर्न सक्ने भनिएको छ । जसको अर्थ नेपालले चाहेर मात्र परियोजना रद्द गर्न नपाने भन्ने हो । यो परियोजना अन्त्य गर्ने अधिकार अमेरिकालाई मात्र भन्ने छ ।
धारा ७ को दफा ७ (क) प्रस्तुत संझौता लागु भएपछि प्रस्तुत संझौतामा उल्लेखित र नेपालको राष्ट्रिय कानून बाझिएमा प्रस्तुत संझौता लागू हुनेछ अर्थात नेपालको कानुन खारेज हुनेछ । त्यस्तै अनुसूची १ (ग) को २ यस परियोजनामा नेपाल सरकारले राज्यका कुनै पनि निकायलाई खटाउनु पर्दा एमसीसीको स्विकृति लिनु पर्ने उललेख गरिएको । यसको अर्थ एमसीसीले निर्माण गरेको परियोजनामा नेपालको अधिकार छैन भन्ने हो । त्यस्तै नेपाल सरकारले एमसीसीलाई चित्त बुझ्ने योजना तयार पारी पठाउनु पर्नेछ र त्यस्तो योजना भारतको सरकारले समर्थन गरेको हुनु पर्ने उल्लेख छ । त्यस्तै एमसीसीमा रहेका शब्दहरुको ब्याख्या गर्ने अधिकार अमेरिकालाई मात्र हुने एमसीसी नेपालमा उल्लेख छ । जसमा व्यापारिक करिडोर पनि उल्लेख गरिएको छ । जसको अर्थ भोली गएर अमेरिकाले हतियारको व्यापार गर्ने भन्ने पनि अर्थ लगाउन सक्ने देखिन्छ । एमसीसी नेपालमा उल्लेखित भाषा अनुसार भोली नेपाल सरकारले हतियारको व्यापार होईन भनेर अमेरिकालाई प्रश्न गर्ने आधार नै राखिएको छैन ।
सापकोटा एमसीसीको पक्षमा उभिने कारणहरु
अहिलेसम्म प्रचण्डले एमसीसीको न विरोध गरे नत समर्थन नै । यसको अर्थ कालान्तरमा प्रचण्ड पनि एमसीसी पास गर्ने पक्षमा उभिने छन् भन्ने हो । अर्थात् सभामुख बनेपछि सापकोटा पनि प्रचण्डकै लाईनमा उभिनेछन् । यसको अर्थ एमसीसी संसदबाट पास गराउन अग्निप्रसाद सापकोटा पनि सहमत हुने छन् । उनी अमेरिकाको सहयोग एमसीसी पास गराउनु पर्ने बाध्यतामा छन् । जुन निम्न प्रकार रहेका छन् ।
पहिलो : सुरक्षाको कारण
अग्निप्रसाद सापकोटालाई पनि पश्चिमा शक्तिहरुले बेला बेलामा घुमाउरो तरिकाले आफ्नो पक्षमा उभिन दबाब दिँदै आएका छन् । प्रतक्ष्य रुपमा दबाब नदिएपनि अप्रत्यक्ष रुपमा नेता सापकोटालाई विभिन्न प्रकारका मनोबैत्रानिक दबाब दिँदै आएका छन् । साकोटालाई एमसीसी पास गर्ने बाध्य पार्ने पहिलो कारण हो सुरक्षा । जनयुद्धका क्रममा भएका विभिन्न घटनामा अग्निप्रसाद सापकोटा संलग्न भएको भन्दै बेला बेलामा उनलाई पक्राउ गर्न मानव अधिकारवादीहरुले सरकारलाई दबाब दिईरहेका छन् । जसरी ओखलढुङ्गाका पूर्वमाओवादीका नेता बालकृष्ण ढ्ंगेललाई तत्कालीन दश बर्षे युद्धको क्रममा एमाले नेता उज्वेन कुमार श्रेष्ठको हत्याको आरोपमा जेल सजाय भयो त्यसरी नै उनी विरद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा रहेको छ ।
काभ्रेका अर्जुन लामालाई अग्नि सापकोटा र सूर्यमान दोङले २०६२ वैशाख १६ गते अपहरण गरी हत्या गरेको भन्दै दायर गरेको जाहेरी दरखास्तलाई २०६४ असार २६ गते काभ्रे जिल्ला प्रहरी कार्यालयले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमार्फत् समाधान गर्ने निर्णय गरेपनि अदालतको परमादेश कार्यान्वयन नभएको भन्दै अधकारकर्मी सुशील प्याकुरेल लगायतले सर्वोच्च अदालतमा रिट मिेत दायर गरेका थिए । अहिले उनी प्रचण्ड निकट भएका कारण सो मुद्दा पेण्डिङमा राखिएको भन्दै बेला बेलामा आवाज उठ्ने गरेको छ । त्यसकारण नेता सापकोटाले पश्चिमा शक्तिहरुलाई धेरै नचिड्याउनु पर्ने बाध्यता रहेको छ । बेला बेलामा केही पश्चिमा देशहरुले फण्डिङ गरेका आईएनजिओका प्रतिनिधिहरुले जनय्ुद्धको मुद्दालाई हेग पुर्याउने भनदै धम्की समेत दिने गरेका छन् । त्यसकारण नेता सापकोटाई पश्चिमा शक्तिहरुसँग सम्झौता गर्नु पर्ने बाध्यता रहेको छ ।
दोस्रो : राजनीतिक कारण
अग्निपसाद सापकोटाई एमसीसीका पक्षमा उभिन बाध्य पार्ने अर्को कारण राजनीतिक कारण हो । माओवादी जनयुद्धको बेलादेखि नै प्रचण्डका विश्वास ात्र रहेका नेता सापकोटालाई आफ्नो राजनीतिक भबिष्य सुरक्षित गर्ने चुनौती पनि उतिक्कै रहेको छ । किनभने अहिले उनले प्रचण्डको लाईनलाई छोडे भने उनलाई राजनीतिक करिअरमा ठलो धक्का लाग्ने छ । त्यसकारण पनि उनले आफ्नो राजनीति स्थान सुरक्षित राख्न पनि प्रचण्डको लाईनमा उभिन आवयक छ ।
माओवादी जनयुद्धलाई प्रचण्ड लगायतका शीर्ष नेताहरुले अवतरण गराएपछि माओवादी र संसदवादी शक्तिहरुका बीचमा १२ बुँदे दिल्ली सम्झौता भएसँगै प्रचण्डलगायतका माओवादीको ठूलो पङ्तीका लागि आर्थिक रुपमा स्वर्ण युगको शुरुवात भयो । माओवादी सेनालाई ११ वटा शिबिरमा राखियो । प्रचण्ड लगायतका तत्कालीन नेताहरु महरा, बर्षमान पुनलगायत अन्य नेताहरु बिरुद्ध माओवादी सेनाको शिबिरमा अरबौँ भ्रष्टाचार भएको भन्दै तत्कालीन एमालेको युवा संगठनले अख्तियारमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो । त्यो फाईल अझै पनि अख्तियारमै रहेको छ ।
प्रचण्डलाई पनि ओलीको कुरा मानै पर्ने अर्को बाध्यात्मक कारण भनेको अख्तियारमा रहेको फाईल पनि हो । त्यसकारण प्रचण्ड आफै पनि एमसीसीको विपक्षमा उभिए महरालाईजस्तै कुनै मुद्दामा फस्न सक्ने भय रहेको बताईन्छ । त्यसकारण ओलीले प्रचण्डलाई साइजमा ल्याउन कहिलेकाही अख्तियारको कुरा उठाने गरेका छन् । तसर्थ नेता अग्निप्रसाद सापकोटा पनि प्रचण्डको विश्वास पात्र भएका कारण प्रचण्डको बाध्यता बुझ्नै पर्ने अवस्था रहेको छ ।
तातो दुध निल्नु न ओकल्नु
माओवादी जनयुद्धको बेला अमेरिकालाई कागजी बाघ र साम्राज्यवाद भन्दै चर्को गाली गर्ने माओवादी नेताहरुलाई अहिले उही साम्राज्यवादको सेनालाई देश भित्र प्रवेश गराउनका लागि एमसीसी जस्तो सम्झौतालाई लालमोहर लगाउनै पर्ने बाध्यत्मक अवस्थामा पुगेका छन् । एकातर्फ पूर्वमाओवादी नेताहरु अमेरिकालाई नेपाल प्रवेश गराउन चाहदैनन् भने अर्कोतर्फ ओलीलगायतका पूर्व एमालेका कारण एमसीसी सम्झौतामा लाहाछाप लगाउनु पर्ने बाध्यात्मक अवस्थामा छन् । पूर्वमाओवादी पङ्ती अमेरिकी हिन्द प्रसान्त जस्तो सैन्य गठबन्धनमा सहभागी हुन अनइच्छुक भएपनि राजनीतिक बाध्यात्मक अवस्थाले तातो दुध निल्नु न ओकल्नु भन्ने नेपाली उखान झै एमसीसी पास गराउनै पर्ने बाह्य र आन्तरिक चेपुवामा परेका छन् ।
गायिका आस्था राउतविरुद्ध पक्राउ पूर्जी
क्रान्तिकारी पत्रकार संगठन, नेपालले सुचना प्रसारण विभागमा दियो १ घण्टा धर्ना